Ogbugbu Haulm na-emetụta Nọmba Nọmba Na Mkpụrụ Mkpụrụ Progeny - Potatoes News
Ọnwụ igbu egbu na-emetụta ọnụ ọgụgụ ndị na-esi na mkpụrụ nduku
N'ọgbọ nke nnukwu ikpe ọnwụ nke Delphy mere n'afọ gara aga na poteto mkpụrụ nduku, ọ dị ka ịfụ na ịfụfụ na-enye usoro nsonaazụ ka mma karịa ọgwụgwọ zuru oke.
Ma na Agria na Spunta mkpụrụ poteto, ịfụ na ịgba dịka atụmatụ maka igbu mmadụ na-ebute ihe karịrị 70 pasent karịa ị ga-agbasa ma e jiri ya tụnyere spraying ubi. Nke ahụ bụ otu n'ime nchoputa nke Delphy nwere ike ịkọ n'oge njem na Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ na Swifterbant na Flevoland.
• Gụọ kwa: Ogbugbu a ga-ekwe omume na-enweghị Reglone na Final
Kemgbe 2019, nzukọ ndụmọdụ na ụlọ ọrụ nyocha Delphy na-eme nnukwu ikpe ọnwụ na-egbu na poteto mkpụrụ na poteto ware. A na-eme nke a n'aha BO Akkerbouw na ebumnuche nke ịnwale usoro ndị ọzọ na pụtara mgbe ndị nwụrụ na mbụ Reglone na Finale nwụsịrị.
Mmetụta na ntọala tuber na mkpụrụ
Dịka akụkụ nke nyocha ahụ, a kụrụ ụmụ nke ihe abụọ sitere na 2020 kụrụ n'oge opupu ihe ubi a na atụmatụ ngosi Delphy na Swifterbant. Emere nke a iji nyochaa mmetụta nke igbu egbu na ihe ndị ọzọ, ntọala tuber na mkpụrụ nke mkpụrụ ahụ. Onu ogugu mbu nke onu ogugu egosiputara ihe di iche di iche iche, ka onye ndumodu banyere ihe banyere ugbo Jan Salomons nke Delphy kwuru.
'Na ihe na propagation nke Agria mkpụrụ poteto, nke na-akpa akwụkwọ na-akpa apịaji afọ gara aga na sprayed mechara, ugbu a anyị gụọ 38 ị ga kwa linear mita. Na ihe na naanị spraying na ubi na Chakwasa ihie na Quickdown, nkezi ọnụ ọgụgụ nke ị ga-ejedebeghị na 22. Anyị na-ahụkwa nnukwu ọdịiche ndị a na otu ngosi na Spunta ', ka Salomons na-akọ.
Ngosi oku maka ozo
Onye na-enye ndụmọdụ gbasara ịkọ ihe n'ubi na-emesi ya ike na ọ bụ n'oge na-adịghị anya iru nkwubi okwu. 'Ma ọ dị egwu ma ọ nwere ike ịmasị maka ndị na-akụ mkpụrụ nduku. Ka o sina dị, a demo anyị ka ga-agụ tuber nọmba na-ekpebi zaa. Ihe a gha acho ihe omuma n’obere uzo. Mgbe ahụ, anyị ga-etinyekwa usoro ndị ọzọ maka igbu mmadụ, dị ka ịdọpụ ma ọ bụ ịgba agba na mbụ, mgbe ahụ na-agbapụ ma na-agba ọzọ.
Loofdoding heeft invloed op stengelaantal na nateelt pootgoed
/ na-eto eto
Tags: Iheanyichukwunnyocha ugbona-eto etoNkpuru osisi nduku
Ọrụ njikọta nke ndị ọkaibe International CIP ọkachamara CIP
AHDB Potatoes Shares Checklist iji mee ka ụlọ ahịa nduku dị njikere
'Poteto na Practice 2021' iji gbado anya na ụdị ọhụrụ, IPM na ihe ịma aka azụmaahịa
Nduku siri ike; ndakpọ olileanya ugbu a ma nwee olile anya maka ọdịnihu
Micronutrients ke foliar nri nduku
Mark Clouse iji weghachite na Campbell
Na-alụ ọgụ na Colorado nduku ebe - nsogbu nke iguzogide